ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ်ထုတ်ကုန်စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ
KD-C25UH-B တရုတ်ရောင်းချသူ လက်ကား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကင်မရာများ 4k ptz ကင်မရာ ကင်မရာအစုံ
1၊ 1/2.5-လက်မ Exmor R CMOS ပုံရိပ်ဖော်၊ ထုတ်လွှင့်မှု အရည်အသွေး 4K ရုပ်ပုံ၊
20x optical zoom၊ SRZ 4K 30x၊ HD 40x;
3၊ Servo မော်တာ မြန်နှုန်းမြင့် ယင်ခေါင်း၊ ဘာသာပြန်/ အစေးအမြန်နှုန်း 0.1°~300°/ SEC;
4. 4K အဝေးမှ ဆုံးရှုံးမှုမရှိသော ရုပ်ပုံထုတ်လွှင့်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ၊
5၊ 8.93 သန်း pixels၊ 3840×2160 ရုပ်ထွက်၊
6၊ 3G-SDI၊ HDMI၊ 4K ဗီဒီယိုအထွက်၊
7၊ 48V Phantom ပါဝါထောက်ပံ့မှုပါရှိသော Audio XLR×2 ထည့်သွင်းမှုတွင် ထည့်သွင်းထားသော အသံကို ထည့်ပါ။
8. Built-in φ9.7 မိုက်ခရိုဖုန်းခင်းကျင်းခြင်းနှင့် 360° TALLY မီးအိမ်;
9. အပလီကေးရှင်း- 4K ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှု၊ စတူဒီယို၊ မီဒီယာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၊ ကင်မရာပေါင်းများစွာ ရိုက်ကူးမှု၊
10. အရွယ်အစား- 160mm155mm×230mm;အလေးချိန် 1.6 ကီလိုဂရမ်ခန့်
KD-BC-8HN စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် အရည်အသွေးမြင့် တာရှည်ခံ 17.3-လက်မ အိတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာနှင့် အသံဖမ်းစက်
1. အသံလွှင့်အဆင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ ရောစပ်သည့်ခလုတ်၊ RGB4:4:4၊ YCbCr4:4:4;
2. Built-in ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောနှောကိရိယာ၊ အန်နာ ရောနှော ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၊ အော်ဒီယို ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု နှင့် အသံ-အမြင် ထပ်တူပြုခြင်း ၊
3. Micro SD/TF Card သိုလှောင်မှု၊ TS-MPEG အဖြစ် အသံဖမ်းခြင်း၊
4. RTMP တွန်းအားပေး တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု;
5. ဒါရိုက်တာခေါ်ဆိုမှုနှင့် TALLY စနစ်;
6. 17.3 လက်မ high-definition display;
7. ကင်မရာ PTZ ထိန်းချုပ်မှု၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်အနေအထား ထိန်းချုပ်မှု၊ အဖြူရောင်ချိန်ခွင်လျှာ ချိန်ညှိမှု၊ အလင်းဝင်ပေါက် ချိန်ညှိမှု စသည်;
8. HDBaseT သည် ဗီဒီယို၊ အသံ၊ PTZ ထိန်းချုပ်မှု၊ TALLY နှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုတို့ကို ထုတ်လွှင့်ရန် ကေဘယ်တစ်ခုအား သိရှိနားလည်သည်။
9. အပလီကေးရှင်း- စတူဒီယို၊ ဆိုက်ပေါင်းစုံ ကင်မရာ ရိုက်ကူးမှု၊ ပညာရေး မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ မီဒီယာ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသော ညီလာခံများနှင့် ပွဲများကို တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊
10. အရွယ်အစား- 425mm×340mm×120mm အလေးချိန်- 5kg ခန့်;
KD-BC-8L စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် အရည်အသွေးမြင့် တာရှည်ခံ 17.3-လက်မ အိတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာနှင့် အသံဖမ်းစက်
1. အသံလွှင့်အဆင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊
2. Built-in ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောနှော၊ အန်နာ ရောနှော နှင့် အသံ ဟာ့ဒ်ဝဲ နှောင့်နှေးမှု၊
3. Micro SD/TF ကတ် သိုလှောင်မှု၊ TS-MPEG2 အဖြစ် အသံဖမ်းခြင်း၊
6. High-definition 10-စခရင်ကွဲ မျက်နှာပြင်၊
8. ကင်မရာပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှု အကာအကွယ်ပါရှိသော SDI ထည့်သွင်းသည့် မျက်နှာပြင်သည် 3G-SDI ဗီဒီယို၊ အသံ၊ PTZ ထိန်းချုပ်မှု၊ TALLY နှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုတို့ကို ထုတ်လွှင့်ရန် 75Ω coaxial ကေဘယ်လ်ကို နားလည်သည်။
10. အရွယ်အစား- 440mm×245mm×85mm;အလေးချိန်: 4.5 ကီလိုဂရမ်ခန့်;
Studio အတွက် KD-BC-8UL 4K ဒါရိုက်တာ Switcher၊ တိုက်ရိုက်၊ အသံသွင်းခလုတ်
1. အသံလွှင့်အဆင့် 4K ဟာ့ဒ်ဝဲ မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊
KD-3DVC-6M မျက်နှာပြင်အပြည့် အိတ်ဆောင် 3D 4K Reality Virtual စက်
1. အိတ်ဆောင် 3D ရုပ်ပုံသုံးကိရိယာ၊ 3G-SDI×4၊ HDMI×4၊VGA×2၊DVI×2၊NDI×4၊SRT×4၊Stream×4 ထည့်သွင်းမှု၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
2. 4-channel virtual keying စနစ်;
3. 64-bit လည်ပတ်မှုစနစ်၊ 4K ပရိုဂရမ်းမင်း kernel၊ Alpha အွန်လိုင်းထုပ်ပိုးမှု၊
4. ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောနှော + အင်နာလော့ ရောနှော + အသံနှောင့်နှေးမှု၊
5. Virtual PTZ+ ကင်မရာ PTZ;
6. 16-လမ်းပြောင်းခြင်း + Virtual အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုစတူဒီယို;
7. ခြေရာခံနှင့်အတူ Virtual စတူဒီယို;
8. virtual စတူဒီယို၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးနှင့်အတူ;
9. လျှောက်လွှာ- ရုပ်မြင်သံကြားဌာန၊ ပကတိစတူဒီယို၊ မိုက်ခရိုအတန်း၊
10. အရွယ်အစား- 425mm × 340mm × 120mm;အလေးချိန်: 8 ကီလိုဂရမ်ခန့်
KD-C18B စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း Full Hd 1920*1080 Sdi Full Hd ဗီဒီယို 12x Optical Zoom Livecam
1. 1/1.8 Exmor RS CMOS;
2. မှန်ဘီလူးအချင်း 105 မီလီမီတာ;
3. အလွန်ကျယ်ပြန့်သောထောင့်၊ 92° ထောင့်ဖြတ်နှင့် 85° အလျားလိုက်၊
4. Servo motor မြန်နှုန်းမြင့် ပန်ကာ/စောင်း၊ ဒယ်အိုးနှင့် စောင်းအမြန်နှုန်း- အမြန်နှုန်း 0.1°~300°/sec;
5. 12x optical zoom;
6. 3G-SDI 1920×1080 ဗီဒီယိုအထွက်၊
7. 360° တာလီ;
8. 75Ω coaxial cable သို့မဟုတ် Category6network cable သည် HD-SDI full HD ဗီဒီယို + audio + PTZ control + TALLY + power supply ဖြစ်သည့် အချက်ငါးချက်ကို ထုတ်လွှင့်ပါသည်။
9. အပလီကေးရှင်း- စတူဒီယို၊ ပညာရေး အသံသွင်းခြင်းနှင့် ရုပ်သံလွှင့်ခြင်း၊ မီဒီယာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ကင်မရာအစုံ ရိုက်ကူးခြင်း။
10. အရွယ်အစား- 160mm×155mm×230mm;အလေးချိန် -2ကီလိုဂရမ်ခန့်;
KD-C1000SRT စူပါအရည်အသွေး Ptz ထုတ်လွှင့်မှု ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့် တိုက်ရိုက်လွှင့်ဌာန SRT ကင်မရာ
ထုတ်လွှင့်မှု အရည်အသွေး 4K ရုပ်ပုံများအတွက် 1, 1 လက်မ Exmor R CMOS ရုပ်ပုံရှင်၊
2. 12x optical zoom၊ SRZ 4K 18x;HD 24 ကြိမ်;
3. Servo မော်တာ မြန်နှုန်းမြင့် ယင်ခေါင်း၊ ဘာသာပြန်/ အစေးအမြန်နှုန်း 0.1°~300°/ SEC;
4. SRT ကေဘယ်လ်၊ SRT ကြိုးမဲ့၊
5. 12.4 သန်း pixels၊ 3840×2160 ရုပ်ထွက်၊
6, 3G-SDI, SRT, HDMI 4K ဗီဒီယိုအထွက်;
7. အချိန်ကုဒ်ဖြင့် MP4/MOV ရိုက်ကူးခြင်း၊ 1920×1080@60fps Ultra TF (MicroSD) FAT32၊ exFAT၊
8. တိုက်ရိုက် SRT၊ RTMP၊ 360° Tally မီးအိမ်၊ dual φ9.7 mic array အားလုံးကို ညွှန်ပေးသည့် မိုက်ခရိုဖုန်း၊
10. အရွယ်အစား- 160mm×155mm×230mm;အလေးချိန်: 1.8 ကီလိုဂရမ်ခန့်;
KD-C18SRT စက်ရုံစျေးနှုန်း တိုက်ရိုက်လွှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကင်မရာ
2. မှန်ဘီလူးအချင်း 105mm;
3. ကျယ်ဝန်းသောထောင့်၊ ထောင့်ဖြတ် 92°၊ အလျားလိုက် 85°;
4. Servo မော်တာ မြန်နှုန်းမြင့် ယင်ခေါင်း၊ ဘာသာပြန်ဆိုမှု အမြန်နှုန်း- အမြန်နှုန်း 0.1°~300°/ SEC;
5. 12 optical zoom;
6. SRT ကြိုးမဲ့နှောင့်နှေးမှု 150ms;
7. MP4/MOV ရိုက်ကူးခြင်း၊ 1920×1080@60fps Ultra TF (MicroSD) FAT32၊ exFAT၊
8. တိုက်ရိုက် SRT RTMP၊ 360° Tally မီးအိမ်၊ dual φ9.7 မိုက် array အားလုံးကို ညွှန်ပေးသည့် မိုက်ခရိုဖုန်း၊
9. လျှောက်လွှာ- စတူဒီယို၊ ပညာရေးရိုက်ကူးမှု၊ မီဒီယာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ၊ ကင်မရာပေါင်းများစွာ ရိုက်ကူးခြင်း။
KD-C25NW အပြည့်ထည့်ထားသော 1/2.5-Inch Exmor R Cmos Sensor 4k အသံလွှင့်အဆင့် Srt 4k Ndi ကင်မရာ
1. 1/2.5-လက်မ Exmor R CMOS ပုံရိပ်ဖော်၊ ထုတ်လွှင့်မှု အရည်အသွေး 4K ရုပ်ပုံ၊
2. 4K 20x optical zoom၊ SRZ 4K 30x၊ HD 40x;
4. NDI Wired NDI Wireless
5. 8.93 သန်း pixels၊ 3840×2160 ရုပ်ထွက်၊
6. SDI, NDI, HDMI 4K ဗီဒီယိုအထွက်;
8. တိုက်ရိုက် NDI၊ 360° Tally;Dual φ9.7 မိုက်ခရိုဖုန်း ခင်းကျင်းမှု အားလုံးကို ညွှန်ပေးသော မိုက်ခရိုဖုန်း၊
10. အရွယ်အစား- 160mm155mm×230mm;အလေးချိန်: 1.6 ကီလိုဂရမ်ခန့်;
KD-C25UH တရုတ် ပေးသွင်းသူ လက်ကား တိုက်ရိုက်လွှင့် ကင်မရာများ 4k Ptz ကင်မရာများ
4. 4K HDBaseT အဝေးမှ ဆုံးရှုံးမှုမရှိသော ရုပ်ပုံထုတ်လွှင့်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ၊
6. 3G-SDI၊ HDMI 4K၊ HDBaseT 4K ဗီဒီယိုအထွက်၊
7. 48V Phantom ပါဝါထောက်ပံ့မှုပါရှိသော Audio XLR×2 ထည့်သွင်းမှုတွင် ထည့်သွင်းထားသော အသံကို ထည့်ပါ။
KD-3DVC-6N စက်ရုံမှ အရည်အသွေးမြင့် တီဗီစတူဒီယို အိတ်ဆောင် 3D Virtual All-In-One စက်ကို တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း
1. အိတ်ဆောင် 3D virtual all-in-one စက်၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
3. SDI×4၊ NDI×6၊ SRT×6၊ Stream×6၊ HDMI×1 ထည့်သွင်းမှု။
4. ဒစ်ဂျစ်တယ် ရောနှော + အန်နာရော ရောမွှေစက် + အသံနှောင့်နှေးမှု + အသံနှင့် ရုပ်ပုံ ထပ်တူပြုခြင်း ထိန်းညှိမှု
5. Virtual ကင်မရာ PTZ + ကင်မရာ PTZ;
8. ၎င်းတွင် virtual စတူဒီယိုတစ်ခု၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးရှိသည်။